Kanchko Parda: Nepali Telibhijanma Mahila - Martin Chautari
HomeDiscussionsUpcoming DiscussionsResearch Seminar seriesMangalbaareyUniversal Connectivity Discussion SeriesAdditional DiscussionsArchivesConferences and WorkshopsPublicationsChautari Book seriesJournalsPolicy BriefsBibilographiesReportsResearch and AdvocacyDemocracy and GovernanceMedia/Universal ConnectivityMediaUniversal ConnectivityEducation and LivelihoodEducationClimate ChangeEnvironmental JusticeHealthLibraryOrganizationHistoryStaffMembersAnnual ReportsAudited Financial ReportsSupportersFellowship on Public Life and Public KnowledgeResearch AidsReading ListsCourses OfferedMiscellaneous ItemsFeedback Kanchko Parda: Nepali Telibhijanma Mahila
Created on Wednesday, 05 September 2012 09:21	काँचको पर्दाः नेपाली टेलिभिजनमा महिला
चौतारी पुस्तक शृङ्खला ३१
लेखकः दीपा गौतम
पहिलो संस्करणः २०६३ - सन् २००७)
पृष्ठः १७४ मूल्यः १२५/-
पुस्तक परिचय / book review
घटना र विचार, १२ वैशाख २०६४, पृ. ६
समय, १३ वैशाख २०६४
कान्तिपुर, २२ वैशाख २०६४
नयाँ पत्रिका, १ वैशाख २०६४
.... तेल बुहारीले होइन छोराले किनेर ल्याएका छन् । आज्ञाकारी बुहारी/ श्रीमती श्रीमान्ले जुन तेल ल्याउँछन् त्यसैमा खाना पकाउँछिन् । तैपनि गाली खान्छिन् ।
... टेलिभिजनको पर्दामा दर्शकले मूलतः पहाडी मूलका नाकमा फूली लगाएका र तिब्बती मूलका साना आँखा भएका महिलाहरूलाई नेपाली महिलाको रूपमा चिन्ने गर्दछन् ।
नेपाली टेलिभिजनमा महिलालाई कसरी प्रस्तुत गरिँदै आएको छ भन्ने सर्न्दर्भमा धेरैमध्ये यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । लैङ्गकि दृष्टिकोणले टेलिभिजनका प्रस्तुतिलाई हेरिँदा तिनमा देखिएका त्रुटिलाई पहिल्याउनु आवश्यक छ । त्यस्ता त्रुटिका कारकतत्वहरू के के हुन् र तिनलाई सच्याउन के कस्ता प्रयासहरू गरिनु पर्दछ भन्नेतर्फ यो पुस्तक काँचको पर्दाः नेपाली टेलिभिजनमा महिला केन्द्रित छ ।
विगतका अन्य अध्ययनको तुलनामा टेलिभिजनमा महिलाको छविलाई केही बेग्लै , केही सरल, र मिहिन ढङ्गले यसमा प्रस्तुत गरिएको छ । टेलिभिजन कार्यक्रम तथा विज्ञापनहरूमा महिलाको प्रस्तुतिलाई केन्द्रभागमा राखी लेखिएको जम्मा चार खण्डको यस पुस्तकका अन्य खण्डहरूमा नेपालमा टेलिभिजन स्थापना तथा यससम्बन्धी विगतमा भएका अध्ययनको पृष्ठभूमि, टेलिभिजनमा महिला सहभागिता र टेलिभिजनमा महिलाका सवालसम्बन्धी नीति निर्देशिकाबारे चर्चा छ । यो पुस्तक टेलिभिजनप्रेमी दर्शक, महिला अधिकारवादी, सञ्चारकर्मी र पत्रकारिताका विद्यार्थीका लागि उपयोगी छ ।
दीपा गौतम नेपाल टेलिभिजनमा प्रमुख निर्माताको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँको सह - अनुसन्धानमा सञ्चारकर्मी महिलाको अवस्था - २०६२) प्रकाशित छ ।
नेपालमा टेलिभिजनको विकासक्रम नेपाली टेलिभिजनबारे पूर्व अध्ययन
असली कामको नक्कली मूल्य
मै छोरी सुन्दरी ...
उहाँले भन्नुभएको जस्तो
पितृसत्ताको विज्ञापन जालो
नराम्रो लोग्ने / ढङ्ग नभएको छोरो र अविभाज्य भान्छा प्रचार कि प्रचार खेती !
चामल बोक्नुको खुसी
पुरुष भएको भए
मामाघरको साटो मावली
सट् साइज र एङ्गल
नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व
अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तीकृत वर्ग
घ. नीति निर्देशिका
कुरै कुरामा सीमित